भावनाहरु र म चाहन्छु छनौट गर्न सबै भन्दा राम्रो अनियमित च्याट, त्यसपछि म तपाईं सुझाव गर्न सुरु संग भिडियो च्याट. तपाईंलाई थाहा छ भने विकास को इतिहास को भिडियो च्याट वा अनियमित च्याट, को नाम कुरा छ, तपाईं बताउन । यो पहिलो भिडियो च्याट भनेर जडान र जडान अझै पनि छन् अनियमित प्रयोगकर्ता संसारभरि देखि मदत संग आफ्नो कम्प्युटर र यसको माइक्रोफोन, र भिडियो क्यामेरा छ । वर्ष मा कि पछि थिए, अन्य भिडियो च्याट, दुवै अन्तर्राष्ट्रिय र साँघुरो राष्ट्रिय (. फ्रान्सेली वा जर्मन च्याट मात्र), तर पनि धेरै वर्ष पछि भिडियो च्याट तिनीहरूलाई एक र सक्ने छैन । शायद तपाईं गर्व महसुस जब तपाईं सिक्न सिर्जना कि च्याट -गर्मी.
सुरुमा, आकस्मिक को थियो, केही प्रयोगकर्ताहरू, तर तिनीहरूको संख्या वृद्धि महिना-गर्न-महिना — यति सरल र सिपालु विचार थियो कि एक जर्मन विद्यार्थी जडान गर्न माध्यम मानिसहरूलाई भिडियो च्याट वरिपरि संसारमा र तिनीहरूलाई असीमित अवसर पाइन्छ । मा तपाईं प्राप्त हुनेछ एक पहिलो संचार स्वरूप भिडियो, र च्याट यहाँ तपाईं गर्न सक्छन् बिल्कुल मुक्त छ । को आधारमा गरे अज्ञात अनियमित च्याट. यसको मतलब यो हो कि जडान गरेर आफ्नो कम्प्युटर मा तपाईं, हुनेछ पहुँच प्राप्त गर्न सयौं जो प्रयोगकर्ता, तपाईं जस्तै बसिरहेका, घरमा पछि एक कम्प्युटर र इच्छा कुराकानी गर्न । साइट गर्नेछ प्रणाली जडान संग तपाईं मा प्रयोगकर्ता अनियमित(भावनाहरु) आधार, छ कि, आफ्नो पक्ष हुनेछ द्वारा चयन विधि को लटरी. सहमत, यो विधि को संचार कुराकानी गर्न, धेरै रोचक र दिन्छ एक वास्तविक एड्रेनालाईन भीड । तपाईंले अब साइटमा जडान संग एक केटी देखि, चीन देखि एक मानिस, नाइजेरिया वा को, भन्न, स्लोभेनिया. खैर, भने मेरो हजुरआमा देखि स्लोभेनिया तपाईं आकर्षित छैन, तपाईं सधैं स्विच गर्न अर्को प्रयोगकर्ता थिचेर»बन्द»बटन. माथि उल्लेख रूपमा, संचार मा पूर्ण अज्ञात छ, त्यसैले साइट प्रयोग गर्न तपाईं आवश्यक छैन गर्न दर्ता. ल्याप्टप त्यसपछि तपाईं बस दिन प्रयोग गर्न अनुमति आफ्नो क्यामेरा र माइक्रोफोन । तपाईं बस क्लिक गर्न आवश्यक बस एक बटन छ । काम भन्दा एक डेस्कटप कम्प्युटर, जोडिएको एक माइक्रोफोन र हेडफोन र पनि छ पहुँच गर्न को भिडियो क्यामेरा छ । अर्को भिडियो च्याट तपाईं लिन्छ मुख्य र एक मात्र पेज आफ्नो च्याट, जहाँ तपाईं भिडियो हेर्न नै, खाली पर्दा जहाँ तपाईं देख्न हुनेछ भविष्यमा को आफ्नो साथी, र केही सरल बटन नियन्त्रण गर्न संचार. सबै छ । दुर्भाग्यवश, छन् कोठा च्याट समर्थन गर्ने खास भाषा छ । भिडियो च्याट छ, पहिलो र प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय च्याट, त्यसैले यहाँ तपाईं संग जोड्न सक्नुहुन्छ जो एक व्यक्ति बुझ्न गर्दैन, आफ्नो भाषा वा छैन पनि बुझ्न अंग्रेजी भाषा छ । अर्को ठूलो समस्या उत्पन्न. त्यसपछि को सर्कल आफ्नो संचार एकदम हुनेछ प्रतिबन्धित छ । यदि तपाईं बोल्न सिद्ध अंग्रेजी, त्यसपछि तपाईं हरेक मौका लागि ठूलो संगति मा यो भिडियो च्याट. भने अंग्रेजी कौशल तपाईं कमजोर, भिडियो च्याट जर्मन एनालग. याद गर्नुहोस् कि आज यस्तो इन्टरनेट मा साइटहरु धेरै छन् । कुनै पनि जर्मन भिडियो च्याट भावनाहरु तपाईं प्रदान गर्न सक्छन्, एक मंच लागि उत्कृष्ट संचार । चयन गर्न एनालग पर्याप्त प्रवेश सोही क्वेरी यस्तो»च्याट भावनाहरु एनालग को भिडियो च्याट». तपाईं प्राप्त हुनेछ एक विशाल राशि को परिणाम जो तपाईं चयन गर्न सक्छन् कि एक तपाईं आवश्यक छ । नोट, कि बावजुद नै सञ्चालन सिद्धान्त, एक जर्मन भिडियो च्याट को मा भिन्न आफ्नो कार्यक्षमता । उदाहरणका लागि, केही मा भेट्टाउने को एक विशेष लिङ्ग, यस्तो भिडियो च्याट संग बालिका वा संग मान्छे । केही भर सख्त संयमता को सामग्री, जबकि अरूलाई प्रस्ताव प्रिमियम सेवाहरूको लागि पैसा । बर्बाद छैन क्रम मा समय मा एक लामो खोज पछि, हामी तपाईंलाई सुझाव संग सुरु पहिलो वेबसाइट खोज इन्जिन मा र आफैलाई लागि देख्न के तपाईं यो बारेमा रुचि र के छैन, र त नजर लागि विकल्प आफ्नो आवश्यकताहरु पूरा हुनेछ. हामी कुनै शंका छ कि तपाईं निश्चित हुनेछ पाउन यस साइट, किनभने आज इन्टरनेटमा सयौं छन्. भिडियो च्याट संग एक अनियमित व्यक्ति, यो सडक तल हिँडिरहेका. तपाईं थाह कहिल्यै तपाईं पूरा हुनेछ, यो हुन परिचित वा छैन । तर मान्छे मा विपरीत, सडक मा मान्छे, शहर मा संभावित तयार गर्न तपाईं संग कुराकानी. यो एक ठूलो बाटो नयाँ मित्र बनाउन, केही नयाँ कुरा सिक्न मान्छे र एक पुरा रूपमा. कसैले पनि हुन सक्छ पाउन सक्षम हुनेछ आफ्नो जोडीलाई. शायद यी मानिसहरू तयार छन्, मलाई संग च्याट गर्न छ, तर म निश्चित छु कि म चाहनुहुन्छ संग कुराकानी गर्न मेरो हजुरआमा देखि चीन छ । पनि मान कि म कुरा गर्न चाहनुहुन्छ उनको मजा लागि, हामी कसरी प्रत्येक अन्य बुझ्न, तर न उनले न त म बोल्न कुनै पनि भाषा बाहेक रूसी.
कि छ, म निश्चित गर्न आवश्यक टिप्न जर्मन च्याट
अनि पछिल्लो एक । यदि म प्राप्त केही समय सहकर्मी, त्यसपछि साँझ बर्बाद केही लागि. सुरु गर्ने कुरा कठिन छैन मा, म व्यक्तिगत त मिल्यो मित्र को इङ्गल्याण्ड मा र जर्मनी, पनि एक प्रेमिका छ, बस एक मित्र संग संयुक्त राज्य अमेरिका संग, जसलाई हामी धेरै राम्रो साथ प्राप्त हुनेछ । निस्सन्देह, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ थाहा अंग्रेजी, त्यो हो मुख्य कुरा त्यो. देखि जर्मन, को पाठ्यक्रम, पूरा गर्न सम्भव छ, तर यति धेरै छैन, र म याद मा संचार को जर्मन बालिका साँच्चै छैन जाँदै, यो नीति हुन सक्छ जस्तै, तर मान्छे संग विदेश देखि यो बस सजिलो कुराकानी गर्न । यो सुन्दर कुरा छ, संचार मा भिडियो च्याट. अक्सर, घर आउन, जाडो मा स्कूल पछि, मूड थिएन कुक, म समावेश हुनेछ ल्याप्टप, र गए, र त्यो सधैं तपाईं कहिल्यै थाहा हुनेछ जो तपाईं संग कुराकानी किशोरी देखि भारत वा एक केटी. मेरो अंग्रेजी गरिब छ, तर म लगनशील भई उहाँलाई सिकाउन, र च्याट कुराकानी ठूलो अभ्यास छ । यो सम्भव छ हुनत र जर्मन मित्र मा च्याट गर्न सुरु, तर कुनै तरिका म अझै यो गठन गरेको छ । राम्रो दिन छ । भिडियो च्याट रोचक र आकर्षक गर्दा नरमाइलो र धेरै एक्लो छ । जब तपाईं चाहनुहुन्छ, कुराकानी नयाँ मान्छे संग, सायद यस्तै गतिविधिलाई । भविष्यमा, त्यसैले यो सम्भव छ गर्न पाउन वास्तविक मित्र संग जसलाई तपाईं कुराकानी गर्न सक्छन् र मा मित्र बनाउन, वास्तविक संसारमा । सामान्य मा, म छु.
र पछि अनलाइन
दुई संयोजन गर्न छ । तर केवल भिडियो, कुनै. म क्लासिक भावनाहरु धेरै जस्तै । यो अत्यन्तै च्याट गर्न सक्छन् जहाँ तपाईं लगभग कुनै पनि मानिस पाउन सकिन्छ, जो रूपमा, र अत्यन्तै पर्याप्त र धेरै मानिस । सामान्य मा, म यहाँ बस्न लगभग हरेक दिन । जस्तै, एक सरल इन्टरफेस र ठूलो अनलाइन. म सिफारिस यो प्रयोग गर्न च्याट । एक राम्रो विकल्प अभ्यास गर्न अंग्रेजी भाषा र संचार कौशल संग व्यक्ति तपाईं देख्न पहिलो पटक हो । पनि पहिले देखेको छैन कि, र वार्ताकार चयन गरिएको छ घट्न. पछि सुरु गर्न च्याट, स्तर को बोलेको अंग्रेजी म एकदम वृद्धि सुनेर थाले बुझ्न भाषा सजिलो छ । र यो कति कठिन थियो आफु भन्दा प्राप्त र कुरा सुरु मा एक विदेशी भाषा) प्रयोगकर्ता को धेरै भर आउन. त्यसैले, तपाईंलाई थाहा छ भने अंग्रेजी, यो हुनेछ एक ठूलो फाइदा छ, तर यो बिना तपाईं यो गर्न सक्छन् । एक आदर्श मौका मान्छे संग कुराकानी गर्न. भेट त संग एक विदेशीले छ । कुराकानी लागि छ महिना संग उनको छ । एकै समयमा झिकेर आफ्नो अंग्रेजी कसरी. यो भिडियो च्याट मेरो मित्र खोल्न, केही वर्ष पहिले म देखे धेरै फरक मान्छे, र कहिलेकाहीं त्यहाँ थिए सभ्य पक्ष र हामी कुरा को लागि एक घण्टा भन्दा बढी छ । भाग्यो भर विदेशीहरू, तिनीहरूलाई को सबै भन्दा राम्रो मान्छे, केही विदेशी शब्दहरू पनि बुझ्न थालेका पछि मान्छे संग संवाद छ । छैन त लामो पहिले अंग्रेजी अध्ययन गर्न र, स्पष्ट, यो समय फर्कन संचार संग देशी स्पिकर मार्फत च्याट. हाँ, म संग असहमत तपाईं बारेमा नोस्टाल्जिया । तर यो पहिले देखिन्थ्यो शानदार संग भिडियो कुराकानी गर्न. केही हदसम्म, यो पनि प्रोत्साहन विदेशी भाषाहरूको अध्ययन, भने ल्याएको संग कुराकानी गर्न विदेशीहरू. सामान्य मा, म भन्न चाहनुहुन्छ कि हास्यास्पद रोचक र आकर्षक कुरा हो ।
← अनलाइन भिडियो च्याट भिडियो च्याट छ, जीवित च्याट